20/02/2008: Submitted for publication via web
QAYBTII SADEXAAD EE LIX IYO LABAATAN GUURADII DHAGAXTUURKA
Maanta oo ku beegan 26 guuradii kasoo wareegtay maalintii dhagaxtuurka ardaydii xaga u dirirka ahaa ee ka soo horjeeday nidaamkii kalitaliska ahaa.
Waxay ahayd maalin Sabti ah, aalaabana maalintaa ardaydu iskuulada waxay u iman jireen si hagar la''''aan ah maadaama ay maalinta Jimcaha ah fasax ahaayeen. Aniga iyo koox aan ku jirnaa waxaanu Iskuulka nimi goor hore, waxaanan filayaa inaan wax arday ahiba naga soo horrayn. Arday kasta oo yimaadaba waxaanu markiiba u sheegaynay in maanta nimankii aqoonyahanka ahaa ee uffo maxkamadda la keenayo, intii aan fasalada la galinnna waxaad arkaysay ardaydii oo arintaa aad u hadal haysa waxaana lagu balamay in marka nusasaacaha loo baxo maxkamadda la tago. Haddii nusasaacihii loo baxay waxaanu u soo dhaqaaqnay anaga oo tiro aad u badan ah dhankaa iyo maxkamadda, waxaanu ku sii hakanay guriga shaqaalaha oo arday badan oo Juun iyo Faarax Oomaar ahiba wakhtiga nusasaacaha u soo shaah doonan jireen. Waxaanu nimi maxkamadda Badbaadada ilaa kuw iyo tobankii oo wax dhiman, waxaana maxkamadda hor tubnaa dad faro badan oo iskugu jiray arday aan iyagu dirays sidan oo uu ka mid ahaa Yuusuf Max''''d Ciise iyo koox arday ahaa oo ururkayga ka tirsanayd iyo dadwaaweyn oo dumar u badan halka raggu uu waxoogaa qaraabadii uffo ay ka ahaayeen. Saacaddu haddii ay is kor taagtay kow iyo tobankii subaxnimo ayaa waxaa gaadhi Land drover ah ka soo degay nin la odhan jiaray Cabdillaahi Baynamber oo markaa haystay ciidanka C.I.D-da iyo laba askari oo ku hubaysan baastoolado. Baynumber wuxuu isa soo hortaagay dadkii goobtaa maxkamadda ku sugnaa isagoo dadka ka codsaday inay isku soo dhawaadaan, waxaanu Cabdillaahi dadkii ku yidhi: Maanta maxkamad lama keenayo qolooyinkii aad sugayseen oo maxkamaddoodii dib ayay u dhacday, waxaana la keenayaa rag xisaabi xil ma leh loo haysto markaa waxaan idiin sheegayaa inaad meesha iskaga tagtaan. Haddii Cabdillaahi baynumber hadalkii intaa ku joojiyey, dadka inta u horaysaana ay tahay koox arday ah, ayay ardaydii cabdilllaahi ku yidhaaheen: Waar dibu dhac lahaane nimanka ma la soo daynayaa.
Cabdilaahi wuxuu ardaydii ugu jawaabay, anugu nimanka ma haystee waxaan idiin sheegayaa inaan maanta halkan la keenayn oo aanu wakhtigu halkan idinkaga lumin. Baynumber oo aan hadalkii afkiisa ka soo wada dhamaan ayuu dhagax qaaday mid ka mid ah ardaydii goobtaa ku sugnayd, dhagaasi oo uu ku tuuray cuskadayna albaabka maxkamadda badbaadada oo muraayad ahaa, waxaanu dhalfiifaha ka dhigay qabcad ka mid ah muraayaddii albaanka. Waxa kale oo isla daqiiqad ka dibna albaabkii qabsaday laba, sadex dhagax oo kale. Mid ka mid ah labadii askari ee Baynambar la socday oo waliba ahaa nin had iyo jeer xagga danbe ka saarnaan jiray baabuurkii shabaglaha ahaa ee maxabiista maxkamadda lagu keeni jiray ayaa intuu la soobaxay baastooladdiisii kor u riday. Dhicitaankii xabaddaasi dhacdayna waxaa lagu qamaamay maxkamaddii iyo sadexdii askari oo dirqi gaadhigii ay wateen ku gaadhay, markii maxkamaddii badbaadada dhalfiifaha laga dhigayna waxaa loo dhaqaaqay maxkamadihii kale ee goobtaa ku yaalay halkaasi oo fooda laysku daray askartii ilaalinaysay. Waxaa is waydaartay dhagaxa iyo xabadda, waxaana goobtii yimi dad laba laab uga badan dadkii hore. Waxaa goobtaa maxkamadaha ka dhawaa xafiisyo badan oo dawladdu lahayd iyo cisbitaalka guud ee Hargaysa, waxaana mar qudhaata goobtii ku soo jabay dadweyne gadoodsan, iyadoo dadku ay u haysteen in meesha dhalinyaradii maxkamadda la saarayey lagu laynaayo. Isla markii intaasi dhcday ayaa waxaa goobtii katagay arday, kuwaasi oo dhankaa iyo iskuulka Faarax Oomaar tagay. Waxay la kulmeen maamulihii iskuulka oo la odhan jiray Liibaan oo ardaydii dugsiga joogtay u diiday inay u baxaan waxaa dhacaya isagoo gate-kii iskuulka dusha ka xidhay. Ardaydii waxay jabiyeen gate-kii ardaydii reer Faarax Oomaarna waxay ka soo daateen daaqadaha. Markii intaa xafiisyada gacanta la mariyey waxaa loo dhaqaaqay dhankaa iyo suuqa, halkaasi oo iskuulka gacan libaax uu markii xabadda uu maqlayba isna uu ku soo dareeray suuqa, iyagoo kaashanaya dadkii dhalinyarada ahaa ee suuqa joogay, haday tahay baalashlayaashii iyo ciyaalkii suuqa joogayba. Waxaa iyaguna qayb lixaadle ka qaatay qolooyinlii jaadka ku iibinaayey xero jaada iyo kuwii jaadka ku iibinayey wadada xero jaadda ag marta ee dhankaa iyo Tiyaatarka qabata. Mudo lagu qiyaaso saacad waxay magaalaga Hargaysi isku badashay maalintaa goob dagaal oo ay ku hirdamayaan laba ciidan oo awood lihi. Dawladii Afweyne waxay soo galisay magaalada Ciidan faro badan iyo beebeeyo, saacado ka dibna waxaa magaalada soo gaadhay ciidankii afar iyo labaatanaad oo laga soo qaaday dhinaca galgeedka. Waxaa maalintaasi dukaamadii Baaniyaalada hortooda xabadi ku dhacday Alla ha u naxariistee Barre Xaaji Cilmi oo ka tirsanaa ururkayaga isagoo markiiba naftu kaga baxday cisbitaalka Hargaysa, waxaa kale oo ku dhintay maalintaa dad shicib ah halka qaarkalena kaga dhaawacmeen. Waxaad arkaysay dhamaan ardaydii dugsiyada sare iyo kuwa dhaxe ee magaalada Hargaysa oo arday waliba balcaddiisii gashan yahay oo dhagaxa tuuraaya,kana baqanayn beebeeyada iyo baabuurta gaashaaman ee xabaddu uga soo baxayso sida dhibica roobka. Xabaddaa bilaabmatay kow iyo tobankii subaxnimo waxay caadi isku taagtay lixdii galabnimo markaasi oo khasaaraha loo gaystay dawladdii faqashtu uu aad u badnaa. Waxaa la jajabiyey dhamaan xafiisyadeedii ha u sii darnaato xafiiska dawladda hoose ee Hargaysiye, oo isaga ilaa calankii hor sudhnaa dab la qabadsiiyey, waxaa la gubay lana jajabiyey dhamaan wixii gaadiid dawladeed ahaa ee magaalada dhexmarayey, waxaana la dhaawacay guulwadayaashii iyo askartii uu Gaani soo dagaal galiyey. Labadii cisho ee maalintaa ku xigayna, waa kow iyo labaatankii iyo laba iyo labaatankii February waxay dhagaxa iyo xabaddu bilaabmayeen lixda subaxnimo halka lixda fiidnimo xabadda iyo dhagaxu ay iska taagayeen. Waxaa maalin sadexaaxii isna ku dhintay Qawdhan Cabaase oo markaa ahaa ardaydii sanadkaa shaqada qaranka ahayd. May jirin Iskuulo la tagay, may jirin meherado la furay, waxaanu Gaani maalintii hore isku dayey inuu rabshadaha joojiyo isagoo soo diray waalidiintii inamada xidh-xidhnaa soona siiyey baabuuro uu microphone-no dusha kaga soo xidhay, kuwaasi oo uu ku yidhi u sheega ardayda inaan inamadii soo daynaayo haddii ay dhagaxa joojiyeen, nasiib wanaagse iyaga iyo baabuurtoodiiba waxaa lagu daray kuwii la jajabinaayey. haddii magaalada sadexdaa cisho dagaalkaasi ka socday laguna soo rogay bandoo, dad badanna la qab-qabtay dadkaasi oo ardaydu ay aad ugu yarayd una badnaa dadkii shicibka ahaa, ayaa waxaa magaalada Hargaysa yimi wafti uu hogaaminaayay Axmed Maxamuud Faarax ( Ina lax was ) kana mid ahaayeen Ax''''d Sulaymaan Dafle iyo Jaamac Gaas Macaawiye, kuwaasi oo loo soo diray inay dadka been u soo sheegaan. Waxay dadka kula hadleen Tiyaatarka Hargaysa iyagoo u sheegay in inamada xidh-xidhan madaxweynuhu cafiyey cafiskoogiina miiska madaxweyne Siyaad Barre saaranyahay balse marka hore la xukumi doono taasi oo ahayd khiyaamo caantayn ah balse dadka waawayni ay ka yeeleen una qaateen run. Waxaa isaguna wakhtigaa waftigaasi yimid ku sugnaa magaalada Hargaysa oo joogay abwaanka weyn ee Cali Sugulle waana markii uu tiriyey heestii ahayd:
Doqon ina Dafliyo, Ina Daylo kude, Dulli Jaamac Gaas, Iyagaa dulmanoo, Loo doodayaa, Maxay doonayeen. Ma nalkii damay, Noo daarayaan, Dadku waa bukaa, Ma daweynayaan, Dakaddii Barbari, Way dillaacsantee, Ma daboolayaan.
Waftigaasi waxay odayaashii magaalada ee ay la kulmeen ku qanciyeen in inamadii xidhnaa maxkamad la soo taagi doono, isla bishan February sideed iyo labaatankeeda kadibna uu Afweyne saamixi doono. Kooxdii uffo waxaa maxkamadda la hor keenay isla maalintaa sidee iyo labaatankii February ee sanadii kun iyo sagaal boqok iyo laba iyo sideetankii, waxaana lixdii March lagu riday xukun iskugu jira dil, xabsi daa''''in iyo xadhig adag isagoo ninkii Afweyne ee saamaxaadooda laga sugayeyna maalin ka dib u anbabaxay wadanka Maraykanka isagoo ku sii hakaday magaalada London ee carriga ingiriiska.
Cabdirisaaq Sheekh Ibraahim Kooshin (Alpho)